Dare raMejastiriti Robvumidza Crisis in Zimbabwe Coalition Kuratidzira Mushure Mekumborambidzwa neMapurisa
Dare ramejasiatiriti muHarare nemusi weMuvhuro rakatura mutongo wekubvumidza sangano reCrisis In Zimbabwe Coalition kuti riratidzire kusafara kwaro nekunonoka kuri kuitwa nehurumende kuvandudza mitemo inobata sarudzo munyika.
Mutongi wedare ramejasitiriti VaLanzini Ncube vakatura mutongo wekuti sangano reCrisis In Zimbabwe Coalition rienderere mberi nehurongwa hwaro hwekuratidzira muHarare neChitatu mushure mekunge sangano iri rarambidzwa nemapurisa kuratidzira richinzi rinozokanganisa runyararo muguta.
Mutongi wedare ati kuratidzira uku kuri kuenderere mberi vachiti bumbiro remitemo rinobvumidza vanhu kuratidzira uye mapurisa haafanire kufungidzira kuti vanhu vachapara mhosva ivo vasina chokwadi nazvo.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakarambidzwa kufora muHarare nemapurisa mushure mekuvazivisa kuti nhengo dzaro dzichazofora dzichiratidza kusafara kwadzo nekunonoka kuri kuita hurumende kuvandudza mitemo inobata sarudzo.
Sangano iri rinoti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa kuitira kuti iringane nebumbiro idzva renyika pamwe nezviga zvinobata nyaya dzesarudzo zvakatarwa nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica re SADC kana kuti SADC Principles Governing the Conduct of Democratic Elections.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaThabani Moyo vanoti vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira VaDavid Nyamanhindi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nemapurisa zvekurambidza misangano izvi zvinhu zvagara zvino zivikanwa kuti ndizvo zvavanoita pose panenge pave kuendwa kusarudzo vachiti mapurisa haafanire kuve nedivi raanorerekera.
Zvichakadaro, mutongi wedare uyu audza mapurisa kuti achengetedze nhengo dzeCrisis in Zimbabwe Coalition padzichange dzichifora muHarare neChitatu.